မိတ်ဆွေ တို့၏လိုအပ်ချ က်နှင့်ကိုက်ညီသညီ ည့်၀ည့် န်ဆောန် ဆော င်မှုပုံစံ။
အော် ဒါ တင်ခြ င်း ၊ ပစည်း လာ ရော က်ကော က်ယူခြ င်း ၊ ပစည်း သွား ရော က်ပို့ဆော င်ခြ င်း နဲ့ လနဲ့ က်ခံသူထံပစည်း ရော က်ရှိခြ င်း အထိ အခြေ အနေ တွေ ကိုတွေ ကိုအချိ န်ချိနဲ့န် တနဲ့ ပြေး ညီအလွယ်လွ ယ်တကူသိရှိနိုင် နို င်ပြီး ပေး ပို့သူအနေ ဖြ င့်သာင့် သာမက လက်ခံ သူကိုယ်တိုင် တို င်ပါ ကျွ န်တော်န် တော် တို့ website မှာ ကြ ည့်ရှုစစ်ဆေး နိုင် နို င်မှာ ဖြ စ်ပါ တယ်။ ဒါ ကြော င့် ပေး ပို့သူ(ရော င်း ချ သူ)နှင့် လက်ခံသူ(ဝယ်ယူသူ) နှစ်ဦး ကြား အပြ န်အန် လှန်ဖုန် ဖုန်း ခေါ် ဆိုမေး မြ န်း မှုတွေ လုပ် လု ပ်နေ ဖို့မလိုအ လို ပ်ဘဲ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်စလုံး အတွက်တွ က်အဆင်မပြေ မှုတွေ ၊တွေ စိတ်ဖိစီး မှုတွေ လုံးတွေ လုံးဝမရှိနိုင် နို င်တော့ ပါတော့ ပါဘူး ။
အခက်အခဲများ အား ဖြေ ရှင်း ပေး နိုင်သော မြ န်ဆန် န်ချောန် ချော မွေ့ သမွေ့ ည့်ဝည့် န်ဆောန် ဆော င်မှုပုံစံ။
ရန်ကုန် ကုန်သန် တ်မှတ်ဇုန်အန် တွင်းတွ င်းရှိ မြို့ နယ် ၃၀ (ဇုန် အေ ၊ ဘီနှင့် စီ) အား နေ့ တနေ့ ပိုင်း ကြို တင်အော် ဒါ တင်ပေး ရုံဖြ င့် နေ့ ချနေ့ချင်း ကော က်/နေ့ ချနေ့ချင်း ပို့ဝန်ဆောန် ဆောင်မှုပေး နိုင် နို င်မှာ ဖြ စ်လို့ ပစည်း ပေး ပို့မှုအတွက်တွ က်စိတ်နှစ်ထား စရာ မလိုအ လို ပ်ဘဲ မိမိတို့ရဲ့ ဈေး ရော င်း ချ ခြ င်း အလုပ် လု ပ်အပေါ် မှာ သာ အာ ရုံစူး စိုက်လုပ် လု ပ်ကိုင်နိုင် နို င်မှာ ဖြ စ်လို့ လုပ် လု ပ်ငန်း အော င်မြ င်ဖို့အခွင့်အင့် လမ်း ပိုမို များ ပြား လာ စေ နိုင် နို င်မှာ ဖြ စ်ပါ တယ်။
နှု န်း ထား သင့်တင့်ရုံသာ မက ရေ ရှည်တွည် တွင်မိတ်ဆွေ ၏စီး ပွား ရေး ကိုပိုမိုအကျိုး ရှိစေ နိုင်သည့်ဝည့် န်ဆောန် ဆော င်မှုပုံစံ။
ပိုမိုစနစ်ကျ နသော ဝန်ဆောန် ဆောင်မှုများ ကို အချို သာဆုံး ဈေး နှု န်း နဲ့ပေးနဲ့ ပေး အပ်နေ တာ ဖြ စ်တဲ့အတဲ့ တွက်တွ က်မိတ်ဆွေ တို့ရဲ့ လုပ် လု ပ်ငန်း ကိုများ စွာ အထော က်အကူပြု နိုင် နို င်မှာ ဖြ စ်ပါ တယ်။ ကျွ န်တော်န် တော် တို့ရဲ့ ချို သာတဲ့ဈေးတဲ့ ဈေး နှု န်း နဲ့ မြနဲ့မြန်ဆန် န်တဲ့န် တဲ့ဝတဲ့ န်ဆောန် ဆော င်မှုတွေ ဟာတွေ ဟာ မိတ်ဆွေ တို့ရဲ့ ဖော က်သည်တွေ ကိုတွေ ကိုဆွဲဆော င်တဲ့နေတဲ့ နေရာ မှာ အကျိုး ဖြ စ်ထွန်း စေ နိုင် နို င်မှာ အသေ အချာ ပါ ပဲ။ အွန်အွ လိုန် လိုင်း လို င်း စီး ပွား ရေး လုပ် လု ပ်ငန်း တွေ အတွေ ချ င်း ချ င်း အကြား ပြို င်ဆိုင်မှုအလွန်လွ ပြန်ပြင်း ထန်တဲ့န် တဲ့ယတဲ့ နေ့ ခေနေ့ခေတ်အခါ မှာ ယုံကြ ည်စိတ်ချ ရ တဲ့ Delivery Service တစ်ခုဟာ မိတ်ဆွေ တို့ရဲ့ စီး ပွား အတွက်တွ က်အလွန်လွ လိုန် လိုအ လို ပ်နေ တဲ့ အား တစ်ခုပါ ပဲ။ ခေ တ်သစ်နည်း ပညာ နဲ့ လုနဲ့ ပ် လု ပ်ငန်း ဆိုင်ရာ လိုအ လို ပ်ချ က်တွေ ကိုတွေ ကိုအမြဲ မပြ တ်လေ့ လာလေ့ လာအကဲခတ်နေ တဲ့ ကျွ န်တော်န် တော် တို့ဟာ မိတ်ဆွေ တို့ရဲ့ လုပ် လု ပ်ငန်း သေး ငယ်သည်ဖြ စ်စေ ၊ ကြီး မား သည်ဖြ စ်စေ စိတ်အား ထက်သန်စွာန် စွာပူး ပေါ င်း ဆော င်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိင့် ရှိ နေ ကြ ပါ တယ်။
မင်းရဲ့အနီးစပ်ဆုံး Elite Pawn & Jewelry Store နဲ့သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Myanmyanpoh Delivery Service & amp; ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းချက်ကိုအထူးအပ်နှံရန်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းနည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်သက်သေပြသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။
Posuere tellus imperdiet facilisis ဖြစ်သည်။ Curabitur vauandy tellus eu semper nunc finibus placerat ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများနှင့်စက်မှုကဏ္ sectors အသီးသီး၌အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မျှဝေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အခိုင်အမာထောက်ခံသည်။
ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်ဖြေရှင်းချက်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးအကောင်အထည်ဖော်သည်။
ကျေနပ်သော Customer များ
Myanmyanpoh Delivery Service သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးနှစ်ခုစလုံးကို Kitex နှင့်ပေါင်းစပ်ကာကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်တင်ကုန်ချများကိုပေါင်းစပ်ရန်ကမ္ဘာနှစ်ခုစလုံးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။
Posuere tellus imperdiet facilisis နှင့် Curabitur faucibusy tellusempery သည်၎င်း၏ nunc finibus placer ဖြစ်သည်။
228, Pathein Myay Street 12, Dawbon Township 11241, Yangon
© Copyright 2021. All Rights Reserved By Myanmyanpoh Delivery Service . Developed By IT Vision (Pvt.) LTD.